4.24.20 MCS COVID-19 Fanavaozana ara-pianakaviana – Mason City sekoly COVID-19 foibe
Raha niandrandra ny fanambaran'ny Governemanta DeWine izahay fa hikatona ny trano sekoly ho an'ny sisa tavela amin'ny 2019-2020 taom-pianarana, tsy ho mora kokoa io. Tena malahelo ny fanananay mpianatra izahay, staff, sy fianakaviana ao an-trano, ary ny zava-dehibe indrindra amin'ny fotoana hifandraisana manokana.
Watch ity video ity ny Superintendent Jonathan Cooper nizara eritreritra momba ny fananganana #MasonMoments nandritra io vanim-potoanan'ny coronavirus io – ary indrindra ho an'ny Kilasantsika 2020.
Manao ahoana ny ambin'ity taom-pianarana ity?
Hanohy hanompo ny mpianatra sy ny fianakavianay amin'ny alàlan'ny fanandramana lavitra ny fianarantsika ny mpampianatra sy ny mpiasanay rehefa mamarana ny taona isika. Ny ekipanay dia misaintsaina hatrany ny fomba hiantohana ny rafitra ataontsika ho fanohanana ny mpianatra sy ny mpiasanay mandritra ity fotoana tsy mbola nisy hatrizay ity., ary miomana amin'ny hoavy araka izay tratry ny fahaizantsika isika.
Hifarana fampianarana vaovao ho an'ny fianarana lavitra lavitra herinandro isika alohan'ny andro farany amin'ny sekoly. 21-27 ny volana ho fotoana ho an'ny mpianatra hanana traikefa virtoaly izay manome azy ireo fanakatonana sy fahafahana hanao veloma farany amin'ireo mpampianatra sy mpiara-mianatra aminy., ary koa ny fotoana ahafahan'ny mpianatra mahazo fanohanana raha ilaina. Mety ho tafiditra amin'izany ny fanaovana fankalazana nentim-paharazana amin'ny faran'ny taona sy ny hetsika fanidiana amin'ny tontolo virtoaly. Mandritra io fotoana io, Ny mpampianatra antsika dia handray anjara amin'ny fianarana matihanina ilaina hiomanana amin'ny 2020-2021 taom-pianarana.
Hanao zavatra hafa ny mpianatra, ao anatin'izany ny fankalazana ny faran'ny taona, nofoanana ny?
Ny hetsika ataon'ny mpianatra eo amin'ny endrika tarehy dia nofoanana mandritra ny taom-pianarana amin'ny trano noho ny fanakatonana ireo trano. Na izany aza, Ny mpiasa dia miasa amin'ny famoronana fotoana fifandraisana azo antoka, fitsangatsanganana an-tserasera, sns.
Ahoana ny fanatanjahantena fanombohana ho an'ny Kilasin'i 2020?
Amin'ny alakamisy, nahazo ity torolàlana manaraka ity avy amin'ny Departemantan'ny fampianarana any Ohio izahay.
"Ny departemantan'ny fampianarana any Ohio dia nametraka fanontaniana maro momba ny lanonana diplaoma sy ny fankalazana faran'ny taona farany ho an'ny mpianatra.. mpanabe, ny mpianatra sy ny ray aman-dreny dia mametra-panontaniana raha tokony manandrana mitaky hetsika manokana ao anatin'izany toetra izany izy ireo. Na dia azonay aza ny dikany, fomba nentim-paharazana sy fombafomba andalana maro amin'ireny hetsika ireny, indrindra ho an'ireo olona efa zokiolona, Ny sekoly dia tokony mitazona hetsika saika fa tsy manao hetsika manokana amin'ny karazan'olona, ary raiso an-tsoratra ireo fisehoan-javatra ireo raha azo atao sy azo tanterahina. Tsy tokony hatao ny lanonana fizarana diplaoma. Fanampin'izany, manoro hevitra izahay ny hisian'ny fankatoavana virtoaly na mifandimby amin'ny datin'ny fiandohan'ny mari-pahaizana efa nomanina na ny daty akaiky indrindra amin'io daty io. Governor DeWine, nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny alatsinainy teo, Aprily 20, Hoy i, 'Mampidi-doza ny fanangonana olona marobe. Tahaka ny sekoly nahitam-bokatra momba ny fomba hampianarana avy lavitra, Fantatro fa hanao fiovana vaovao izy ireo rehefa mijery ny fomba… hanomezam-boninahitra ny mpianatra… 'Mangataka ny vondron'ny fampianarana izahay fa hiaraka hanome voninahitra ny mpianatra, indrindra ireo zokiolona, amin'ny fomba tsy miteraka risika ara-pahasalamana ho an'ny olona. Ny sekoly dia tokony hanohy hahatakatra ny maha-zava-dehibe ny famerana amin'ny fivoriam-be, ary ny hetsika dia tokony hifanaraka amin'ny baikon'ny Departemantan'ny fahasalamana any Ohio. ”
Ao Mason, fantatray fa ny diplaoma dia fomban-drazana sy hajaina amin'ny lova. Hanaraka ny baikon'ny fanjakana izahay ary hanao fanatanjahantena virtoaly araka ny nomanina voalohany tamin'ny alahady, Mey 24, 2020. Ny lanonana dia ho fitambaran'ny fotoana mivantana sy voarakitra mialoha. Izahay koa dia mikasa ny hamorona fankalazana fetin'ny fizotran'ny kilasy faha-50 2020 ao anatin'izany ny fotoana mety hahitana am-po hahazoana fifandraisana manokana. Hizara ny drafitra feno hanombohana ny zokiolona sy ny fianakavian'izy ireo amin'ny herinandro ho avy io.
Fantatray izao fa tsy hiverina any an-tsekoly intsony isika amin'ny volana Mey, afaka maka ireo zavatra tavela ao an-dakilasy sy ireo trano isika?
Raha zanakao mila zavatra ilaina amin'ny fianarana lavitra, Azafady mba alefaso ny zana-janaky ny zanakao ary hiara-miasa aminao izy mba hanana ilay zavatra natolotra anao, na ho avy amin'ny fomba azo antoka hahatongavanao azy.
Amin'ny herinandro ambony, hambaranay ny drafitry ny fianakaviana haka ireo entana sisa tavela any am-pianarana. Mba hitazonana ny fepetra takiana amin'ny sosialy, hangatahana fianakaviana hijanona ao anaty fiara, ary hapetraka ao anaty vatan'ny fiaran'ny fiara ny entan'ny zanakao.
Tapaka ny fanatanjahan-tena lohataona?
Satria ny sekoly dia mijanona ara-batana ho an'ny ambinin'ny taom-pianarana, ny fanatanjahan-tena sy ny fifaninanana amin'ny lohataona rehetra dia nofoanana ny Ohio Athletic Association any Ohio.
Moa ve ny distrika hanao fanodinana famerenam-bola amin'ny hetsika izay tsy mitranga ankehitriny?
Izahay dia manao fanodinana famerenam-bola ho an'ny saram-pianakaviana, mialoha sy aorian'ny fandaharam-pianarana fandrindrana ny zaza, sy ny hetsika efa nomanina taloha hotanterahina ny volana Mey. aza hadino fa, rehefa mahazo ny fangatahana famerenam-bola ny Birao Fiscal dia mety haharitra herinandro maromaro.
Raha manana fanontaniana momba ny sarany manokana ianao, azafady mba ifandraisao ny Principal tranobanao.
Olom-pirenena zokiolona: United Way of Warren County Volunteer Resource Center amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Warren County Community Services dia ny fandraisana mpiasa mpilatsaka an-tsitrapo vonona ny hividy ho an'ny 250 ireo olom-pirenena zokiolona ambany indrindra sy atahorana ao an-tanàna misy anay. Ireto no zavatra fototra sy maharitra. A $50 karatra fanomezana, lisitry ny fiantsenana, ary boaty azo alaina ao amin'ny Sabotsy 25 aprily ao amin'ny United Way of Warren County (3989 S. Lalana amerikana 42, Libanona, NY 45036) eo anelanelan'ny 11 maraina. Dia avereno ny entana ny alakamisy 30 aprily ho any amin'ny serivisy Community Community Community any Warren (570 N Lalana ho an'ny fanjakana 741, Libanona, NY 45036) eo anelanelan'ny 10 ora maraina. Azafady hidirana ny fidirana amin'ireo habaka misy.
Misaotra anao tamin'ny zavatra rehetra nataonao nandritra izao fotoan-tsarotra izao. Miray hevitra isika!